Ijikwa Nsogbu Nkwukọrịta | Nzọụkwụ Nzọụkwụ Infographic site na Martech Zone
Nwetụla nsogbu metụtara ụlọ ọrụ gị? Ọfọn, ọ bụghị naanị gị. Mkparịta ụka ọgba aghara nwere ike ịba ụba - site na nzaghachi oge maka ihe ị kwesịrị ịgwa ndị niile gbasara mmekọrịta mmadụ na-abata iji chọpụta ma ọ bụ ezigbo nsogbu. Ma n'etiti ọgba aghara, ọ dị mkpa mgbe niile inwe atụmatụ.
Anyị na-arụ ọrụ elekọta mmadụ n'elu ikpo okwu haziri nzukọ na Meltwater ịzụlite a kemmenyeujo infographic na Nzọụkwụ 10 maka Ijikwa Nkwukọrịta Nsogbu. Ihe ha maara tinyere sọftụwia ha wuru enyere ndị otu ahụ nnukwu nghọta banyere otu esi emeso nsogbu mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nke kachasị, tupu ịme ihe ọ bụla, ịkwesịrị iku ume, iku ume, na ikwugharị. Wetuo obi ma lekwasị anya na usoro ndị ọzọ.
Buru mmiri, ikupụta, megharịa - Emebula ihe ngwa ngwa ma ọ bụ n'ụzọ mmetụta uche. Ndị ụlọ ọrụ na-egwupụta onwe ha olulu miri emi mgbe ha na-emeghị atụmatụ nzaghachi ha.
Gburugburu ụgbọ ala ahụ ma tie mkpu - Kpọkọta ndị otu, kọọrọ ha ihe merenụ, chere ma zaghachi ruo mgbe ị ga-eme atụmatụ doro anya.
Nyochaa ihe mere - Kedu ihe mere? Kedu ihe ọha mmadụ chere chere mere? Gịnị ka ọhaneze mere? Kedu ọwa chọrọ nlebara anya?
Ghọta mmetụta azụmahịa - Kedu ka mkpebi gị ga-esi emetụta azụmahịa, ego, na aha njirimara?
Gee ntị - Jiri ngwa nlekota oru PR na nke soshal midia iji lelee mmeghachi omume nke usoro mgbasa ozi na obodo gị.
Kpebie na Ọnọdụ na Izi ozi - Ugbu a ị matara ihe merenụ na mmetụta azụmahịa ahụ, ị ​​ga-enwe echiche doro anya banyere ọnọdụ ị ga-ewere.
Mee Mkpebi na Channels nke Nkesa - Dabere na nhazi na izi ozi, chọpụta ọwafe nnyefe kachasị mma, ihe otu gị kwesịrị ịzaghachi, yana otu ha kwesịrị isi meghachi omume.
Wepụ OKWU - Nweta ozi gị.
Nyochaa mmeghachi omume na meghachi omume dịka ọ dị mkpa - not mebeghị. Ugbu a ịkwesịrị nyochaa mmeghachi omume na ihe ndị dị mkpa a ga-eme na-esote na mmeghachi omume nke mgbasa ozi na mmetụta ọha mmadụ.
Mụta site na Usoro ahụ - You'll ga-amụta ihe ọhụrụ, n’agbanyeghi otu ihe si aga.
Agbanyeghị na ụlọ ọrụ na-ekwusi ike na-etinye usoro azịza mberede, ọtụtụ ụlọ ọrụ yiri ka ha enweghị ike ịgbaso ụkpụrụ ndị siri ike nke nkwukọrịta nsogbu: ịga n'ihu na akụkọ ahụ, na-eme mkpebi siri ike, na-enye mmelite ugboro ugboro na eziokwu, na ịghara ịta ndị ọzọ ụta.
Mahadum Maryville, Ndụmọdụ Nkwukọrịta Nsogbu nke Ndị Ọkachamara PR
Lelee infographic dị n'okpuru maka atụmatụ egwuregwu dị ukwuu nkwurịta okwu nsogbu, ma nweere onwe gị ịkọkọrịta ahụmahụ gị n'okpuru!
Tags: nsogbunkwurịta okwu nsogbuusoro nkwukọrịta nsogbuinfographicgbazee mmiriprmmekọrịta ọhanezensogbu ọha na ezenzọụkwụ
Ọkt 12, 2016 na 9:57 AM
Atụmatụ dị ukwuu! Nnọọ aka!
Ekwenyere m na ihe ndabere nke ijikwa nsogbu bụ iji ezigbo ihe eji ege ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe (ntụgharị Brand24) Site na nke a, ị ga-ebu ụzọ mara mgbe mmadụ kwuru gbasara gị ma nwee ike imeghachi omume n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ihe kwesịrị n'oge a.
Brand24 bụ ezigbo ngwaọrụ ige ntị - ọtụtụ nhọrọ!